Ogologo oge ole ka njegharị Tour de France? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Kedu mgbe njegharị de france na - akwụsị - ịza ajụjụ
Kedu mgbe njegharị de france na - akwụsị - ịza ajụjụ
Ogologo oge ole ka njegharị Tour de France?
NaTour de Francemalitere na Brittany na Satọdee June 26, 2021, na oghere 197.8-kilomitaogbosite na Brest ruo Landerneau.1 ụbọchị gara aga
Na 1910, Alphonse Steines, otu n'ime ndị dere Desgranges, tụrụ aro ịgbakwunye ntụgharị ọhụrụ na ụzọ: tourmalet. Ọ bụ ebe mgbago ugwu dị kilomita iri na itolu nke nwere mita 1400 nke elu ya na nzukọ ahụ. Iji hụ ma nke a ọ ga-ekwe omume, Steines banyere n'ime ụgbọ ala ya iji gbagoo.
Ọ gbagoro, mana ụgbọ ala ya arachiri na snow, tara ahụhụ site na hypothermia ma ọ fọrọ nke nta ka ọ nwụọ. Ka o sina dị, o zigara ozi teligram na Tourmalet agafeela. Goodzọ dị ezigbo mma.
N'ụzọ zuru oke The Tourmalet mere mmalite ya na njem ahụ na 1910. Onye France na-agba ịnyịnya ígwè Octave Lapize bụ onye izizi na-aga nke ọma ịrịgo.
N'afọ a ụzọ a nwere usoro 21 karịa ụbọchị 23. Ọ nwere 30 isi climbs; asaa n'ime ha bụ ndị kacha sie ike ụdị nke njegharị ahụ. Gụnyere Tourmalet, nke dị maka oge 86th.
N'ebe a, ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-agbakọ otu ihe a na-akpọ peloton. Ọ na - enye ndị na - agba ịnyịnya ígwè aka ịchekwa ike site na ịnọdụ ala n’azụ onye na-agba ịnyịnya ma ọ bụ ịnya ụgbọ mmiri. N’ọsọ dị elu, ndị ọkwọ ụgbọ ala na-eji ike ha niile eme ihe maka ịgba ọsọ megide ikuku ikuku.
oxalates na mkpụrụ
N'ebe a na isi nke peloton, onye na-agba ịnyịnya Tour de France ga-ewepụta opekata mpe 300 watts. M malie n’ịnyịnya ígwè iji hụ otú ọ dị na ọ bụ naanị kilomita abụọ na 300 watts bụ n’ezie siri ike. Maka ntụnyere: ọ bụrụ na onye ọkwọ ụgbọ ala dị n’azụ ihu peloton, naanị ya kwesiri itinye ihe dị ka 240 watts ka ọ kwaga n’otu ọsọ ahụ.
Ha na-akpọkọta ndị otu egwuregwu ha bụ ndị ọrụ ha bụ ịrụ ọrụ siri ike ugbu a ka onye kachasị gbaa igwe kwụ otu ebe zuru ike maka akụkụ kachasị sie ike, ugwu. Ebe ha kwesiri ịnọ naanị ha. Ka peloton ahụ bidoro gbagoro n’elu ugwu, ọ na - akwụsịlata.
Na nke a, agbụrụ ahụ dị obere banyere ọgụ megide nguzogide ifufe karịa banyere ike ndọda, nke na-emetụta ndị ọkwọ ụgbọala niile na peloton. Yabụ ugbu a ọkwọ ụgbọ ala ọ bụla kwesịrị itinye ike pụrụ iche n'ihu na n'azụ iji wee nwee ike ijigide ijeụkwụ ahụ. Dị ka ihe atụ, na 2010, onye Denmark bụ Chris Anker Sorensen gbagoro n’elu njem Tourmalet. “Legodị ihu Chris Anker Sorenesen.
Ọ na-enye 415 watts ihe karịrị 11 nkeji. '... ihu nke Chris Anker Sorensen ugbu a, onye na-ekesa ihe mgbu ahụ n'ezie.
N'ebe a, ọ ruru ihe dị egwu 590 watts. 'nnukwu ịnya ụgbọ ala site n'aka Chris Anker Sorenson mana ogologo oge ka ọ ga-ewepụ? “Ugbu a, lee onye America na-agba ịnyịnya bụ Chris Horner. N'agbanyeghị na ọ dị ọtụtụ ọnọdụ n'azụ Sorenson, arụmọrụ ya fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu.
Ogologo oge ole bụ Tour de France 2021?
Cheregodi naanị otu nkeji. Agbanyeghị, echegbula onwe gị ịhapụ ịhapụ otu a. Nwere ike ịrịọ otu onye otu maka enyemaka. - Ọ dị mma, nwunye, enwere m gị. - Ọ dị mma, anyị nwere ike ịgaghị akwado ime nke a na ịgba ịnyịnya ọgbakọ gị, mana n'ọsọ ọ nwere ike ịbụ ọdịiche dị n'etiti mmeri ma ọ bụ Mee maka mmeri.
Oh, achọrọ m nke ahụ! Ugbu a otu ihe pro ga-adị ezigbo mma na, na-agbanwe agbanwe oyi akwa nke uwe ha iji dabara ọnọdụ ha na-enwe. Anyị niile maara na ha mara ezigbo mma n'iwepụ ma wepụ akwa mmiri ozuzo! Mana ọ bụrụ na ị attentionaa ntị, ị ga - ahụ obere ahụ achọpụtara ma n'ụzọ doro anya ihe na - atọ ụtọ karị - ọdịda anyanwụ - ị nwere ike ịhụla Sagan tinye igwe kwụ otu ebe na etiti agbụrụ ma na - eche etu o si eme ya ebe ọ na - achịkwa igwe kwụ otu ebe na - ejigide nkà , karịsịa mgbe ị na-edozi njikwa aka, mana ndị ọkachamara na-edozi igwe kwụ otu ebe ha oge niile. Ọnọdụ kachasị dịkarịsịrị bụ ịdozi brekị, tụmadị ma ọ bụrụ na ịnwe igwe kwụ otu ebe nwere akara brek.
Ihe kachasị njọ maka ọkachamara bụ na breeki gị na-ete n'ahụ rim ahụ. N'ihi ya, ịtọghe ndị na-emezi gbọmgbọm ahụ bụ nkà onye ọkachamara ga-enwerịrị ruo T. N'ezie, mmezi mgbatị rim, mgbe emechara n'akụkụ ụgbọ ala otu, ọ ga-abụ na ọ ga-enwe usoro kachasị dịkarịsịrị nke onye na-agba ịnyịnya ígwè - Na-ekwu maka idozi ihe m karama onu na-abịa atọpụ.
H have nwere ngwa ọrụ maka m? Ewoo! Ọma! - ulldọpụ ikpere m - ma ọ bụ ndị na-ekpo ọkụ ụkwụ na godos dị ka ezigbo ike ịmara. Mana iji usoro ziri ezi, ọ nwere ike ime ya. Nke ahụ kwuru, uru ndị ahụ na-eme ka ọ dị mfe nghọta ma dịkwa egwu.
Na m pụtara, ọ siri ike na ndị na-ekpo ọkụ ụkwụ karịa ikpere ikpere, mana ọ bụ otu ị ga - esi mee ya. - (Dan) Nzọụkwụ 1: weta ikpere ikpere gị ruo nkwonkwo ụkwụ gị. Kwụ na Rolkwụ 2: Nyefee okpomoku gị n’ikpere ụkwụ gị nso nso ụkwụ gị.
Kwụpụ 3: Kwụpụ akpụkpọ ụkwụ gị ma kpuchie ihu gị, wee mechaa. Kwụpụ 4: ghaa azụ ma tinye ikpere ikpere gị n'akpa gị ma ọ dị na nke na-esote. Nakọta ihe oriri na ihe ọ drinkụ drinkụ si n'akụkụ ụzọ bụ nkà ọzọ dị ezigbo mkpa maka ọkachamara ma nwee ike bụrụ ihe dị oke mkpa, dị ka ya na copes nwere ọkara nke abụọ nke agbụrụ ahụ.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ agbụrụ niile nwere mpaghara nri mgbe ihe dị ka kilomita 90, dị ka nke a. Onye ọkwọ ụgbọ ala ga-eri obere karama mbụ na akụkụ ụfọdụ nke nri ya ebe ndị ọbịa na-adọba ụgbọala ma kesaa karama ndị ahụ. Mgbe ọkwọ ụgbọ ala chọrọ ijide karama ahụ, ọ na-egosi ndị otu ahụ na ọ chọrọ ịpụ, na-akwụsị n'akụkụ ụzọ, na-esetị aka ya, na-ahụ onye ọka a nke yi uwe yiri ya wee jide karama ahụ.
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbatị miri emi wee laghachi na onye na-agba ịnyịnya ụkwụ gị, enwere ike ịnweghị ịnwale nke ọ bụla n'ime ha. - Ee e, nke ahụ bụ eziokwu, ma ọ bụrụ na ịchọrọ isiokwu a, nye ya nnukwu mkpịsị aka. maka edemede ọzọ, lelee nke a, jụọ uru.
Ihe ojoo nke abuo meririTour de Franceakwadola ọnọdụ Mathieu van der Poel dị ka ụwaonye kachanụ kachanụn'ime ụwa, dị ka Sir Bradley Wiggins si kwuo.Ọnwa Isii 28. 2021 g.
Ma nkwa ya na isi ike ya abụghị naanị na igwe kwụ otu ebe, kamakwa anya. O doro anya n'otu oge ọ jiri akaụntụ Hotmail nke Kenya Cycling Association zigara ndị otu egwuregwu egwuregwu, UCI, na-agwa ha na Kenya ga-eziga otu U23 na World Championship. Ugbu a, enwere m ike ikwu n'ụzọ doro anya na ụdị Froome na-arịgo isi ya na ikpere aka gbatịrị agbatị abụghị nke kacha mma. Nke mbụ a bịara mara na Vuelta a España na 2011 ebe ọ mechara bido nke abụọ mana ọ mechara bụrụ onye mmeri nke agbụrụ ahụ kwalitere.
ọnya ma ọ bụ eriri ọbara
Ndi Tour de France ga - eme na 2021?
The 2021 Tour de France ga-amalitena June 26 naihempagharanke- Brittany,France. Ọgabido naiheobodonkeBrest tupu ịme njem yaihemba na gwụchara azụ na Paris izu atọ ka e mesịrị.
Pogacar merụrụ mmụọ na-akụda mmụọ n'ụbọchị mbụ nkeNjegharịna Alps na Sọnde (oge NZ), mgbe precocious kpakpando na-agba ịnyịnya ígwè na-ekwuacha odo odomgbe nkea mechara bụrụ nke asatọ na-emetụta onye ọ bụla. Pogacar malitere ụbọchị atọ nkeji, sekọnd 43 pụọ na isi nke Mathieu van der Poel.4 ụbọchị gara aga
Gịnị mere ịgba ịnyịnya ígwè ji eme m ka m daa?
Typesdị mmega ahụ ụfọdụ na-eme ka nri gabiga ngwa ngwa gị ngwa ngwa karịa ka ọ na-adị. Nke anwere ikena-eme ka nsị nke nsị nke nri na-ebelata belata, obere mmiri na-agbanweghachi site na colon, na atọghe stool. Ọ na - apụtakarị n’oge ma ọ bụ mgbe ụdị mmega ahụ siri ike dịka ịgba ọsọ, ibuli elu, naịgba ígwè.Septemba 17 2019
Kedu ihe bụ ọkwa kacha elu na Tour de France?
NankeA na-ahọpụta Loze nke kachasị igwe kwụ otu ebeFrance. Gbaa njem kilomita 16.3 na-enweta mita 1405 na 8.6% nkeziọkwa. Nke a bụ naanị Top 10 French igwe kwụ otu ebe dị na Pyrenees.
Kedu mgbe Tour de France na-amalite ọzọ?
Covid na Tour de France 2021 Na-egbochi njọ ọ bụla na-arịwanye elu nke nsogbu Covid, 2021 Tour de France ga-eme n'oge oge nke afọ na 2021, malite na June 26th. Agbanyeghị, site na ọtụtụ mgbochi Covid ka dị, ọ gaghị 'alaghachi n'oge ochie'.
Ogologo ha niile ga - abụ 58 kms, 27 kms n'etiti Changé na Laval Espace Mayenne na 5 na 31 kms n'etiti Libourne na Saint-Émilion maka oge nke 20. Obodo 10 ọhụụ ma ọ bụ saịtị saịtị ga-apụta na map nke 2021 Njegharị na ngụkọta nke 39:
Kedu ihe mere njem Tour de France ji kwaga Copenhagen?
Ya mere 2021 Tour de France weghachitere otu izu. N'ihi na Copenhagen anabatalarị asọmpi nke European Championship nke 2021, e kpebiri ịkwaga Grand Depart na ebe ọzọ maka 2021. Ya mere, Copenhagen ga-anabata ndị njem na 2022.